ယုံကြည်ခြင်း - မမြင်နိုင်သော - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ဆောင်းပါး > အသက်တာ၏စကားပြောသော > စဉ်းစားပါ - ထိုမမြင်ရတဲ့တွေ့မြင်
သခင်ယေရှု၏အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆင်နွှဲခြင်းမပြုမီငါးပတ်မှခြောက်ပတ်အထိသာရှိသည်။ ယေရှုသေဆုံးပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ချိန်မှာအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ပထမတစ်ခုကသူနဲ့အတူသေခဲ့တာပါ။ ဒုတိယကတော့ငါတို့နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတာပါ။
Der Apostel Paulus drückt es so aus: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit (Kolosser 3,1-4) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်ခရစ်တော်သည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသောအခါသင်နှင့်ကျွန်ုပ်အပါအဝင်လူသားအားလုံးသည်ဝိညာဉ်ရေးသဘောအရထိုတွင်သေဆုံးခဲ့သည်။ ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားကိုယ်စားအသေခံခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစားထိုးသူအဖြစ်သာမကသူ၏သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သူသေ။ ထမြောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သူနှင့်အတူသေဆုံးပြီးသူနှင့်အတူထမြောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးသောသားတော်ခရစ်တော်၌မည်သူဖြစ်သောကြောင့်ခမည်းတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုဆိုသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလေရာရာ၌ခမည်းတော်ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိုသို့ပြုသူမဟုတ်ပါ၊ ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသည်။ သခင်ယေရှု၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်၏တန်ခိုးနှင့်အပြစ်ဒဏ်မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၌၎င်း၊ ခမည်းတော်၌၎င်း၊ သမ္မာကျမ်းစာကဤအရာကိုဒုတိယမွေးခြင်းသို့မဟုတ်အထက်မှမွေးဖွားခြင်းဟုခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်သစ်ဖြင့်ပြည့်ဝသောဘ ၀ ကိုရှင်သန်ရန်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးအားဖြင့်အထက်မှမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကဖတ်ခဲ့သောအခန်းငယ်နှင့်အခြားအခန်းငယ်များအရကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်ခရစ်တော်နှင့်အတူရှိနေ၏။ ငါအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအသက်ပြန်ရှင်လာတာ။ ယခုတွင်သင်သည်ခရစ်တော်၌အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်ခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူနှင့်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိကြောင်းထင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုခရစ်တော်နှင့်ဝေးကွာသည်ဟုမထင်သင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်သည်ဘုရားသခင်၌ခရစ်တော်နှင့်အတူဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်တလုံးတ ၀ တည်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်သည်ကိုယ်တော်၌တည်၏။ ကိုယ်တော်သည်ငါတို့၏အသက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်။ ငါတို့အဲဒီမှာနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေကြီးသားများသာမဟုတ်ပါ။ ငါတို့မူကား၊ ကောင်းကင်သားများဖြစ်ကြ၏။ ၎င်းကိုယာယီ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ထာဝရဖြစ်သောကောင်းကင်အချိန်ဇုန်နှစ်ခုတွင်နေထိုင်ခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြလိုသည်။ ဒါတွေကိုပြောဖို့လွယ်တယ်။ သူတို့ကိုကြည့်ရတာခက်တယ် သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသောနေ့စဉ်ပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်တိုင်ထိုအရာများသည်မှန်ကန်သည်။
Paulus beschrieb es in 2. ကောရိန္သု 4,18 wie folgt: Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist genau der Punkt von alldem. Das ist das Wesen des Glaubens. Wenn wir diese neue Wirklichkeit, wer wir in Christus sind, sehen, ändert das unser ganzes Denken, einschliesslich dessen, was wir in diesem Augenblick durchmachen mögen. Wenn wir uns selber als in Christus wohnend sehen, macht es einen gewaltigen Unterschied aus, wie wir in der Lage sind, mit den Angelegenheiten dieses gegenwärtigen Lebens fertig zu werden.